Mamorona adaptatera audio Kindle anao manokana latsaky ny $ 20 | Ireo mpamaky rehetra
Joaquin Garcia | | Accessories
Andro vitsy lasa izay, adaptatera vaovao Amazon no tonga teny an-tsena izay ahafahan'ny mpampiasa mihaino ny ebook na ny menio rehetra, nefa tsy mila manova ny fandrehitra na mametraka mpanova. Ny marina dia mahaliana ilay fiasa Voiceview ary Ny Kindle Audio Adapter dia zavatra azo ampiharina sy lafo vidy satria afaka mahazo izany amin'ny $ 20 isika.
Mpampiasa maro amin'ny Kindle eReaders no nahavita namorona Kindle Audio Adapter latsaky ny $ 20 sy ho an'ny tsena rehetra. Fitaovana iray izay tsara toy ny fitaovana am-boalohany ary miasa amin'ny Fitaovana Amazon farany raha tsy ny Kindle Fototra.
Ny Kindle Audio Adapter dia azo atao amin'ny entana mora vidy na lafo vidy
Mba hamerenana ity fitaovana ity dia mila mividy microusb to usb adapter, usb sy adapter audio ary headphone fotsiny isika. Afa-tsy ny écouteur, ny adaptatera hafa rehetra dia mitentina $ 5 isaky ny Amazon na Ebay. Tsotra ny fizotry ny fanamboarana: ampifandraiso ireo mpampifandray roa ary avy eo ny adaptatera microusb amin'ilay eReader. Ampidirinay ao amin'ny headphone ary dia izay.
Raha mampifandray ny Kindle Audio Adapter amin'ireo eReaders farany indrindra isika dia hiasa ny fitaovana Ny fiasa Voiceview dia hita amin'ny fitaovana farany. Amin'ny raharahan'ny Kindle Voyage dia mila rakitra sy programa fanampiny hanatanterahana an'io asa io isika, na izany na tsy izany, amin'ny alàlan'ny tranokala mpanohana Amazon dia afaka mahita ny zavatra ilaintsika maimaimpoana isika.
Raha ny momba ny Kindle fototra dia tsy manohana azy intsony ny eReader VoiceView dia mila ondrilahy 512Mb ary ny Kindle fototra dia manana RAM 256 MB ihany, zavatra izay ahitsy ao amin'ny kinova manaraka amin'ny maodely, maodely izay hihaonantsika amin'ity taona ity ary manana ny solon'anarana Woody.
Izaho manokana dia mihevitra fa mahaliana ity foronina ity, tsy noho ny tahiry izay dikan'ity adapter vaovao ity fa satria hanolotra ny fitaovana ho an'ny tsena izay tsy tratrany na tsy tonga izao.
Aiza no hividianana ireo singa ilaina:
Adapter Microusb mankany USB.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ireo mpamaky rehetra » Hardware » Accessories » Mamorona Kindle Audio Adapter anao tsy latsaky ny $ 20
Caliber dia mifanaraka amin'ny BQ Cervantes 3
Rahoviana no hitsoka ny fivarotam-boky ny Rivotan'ny ririnina?